Halong ဂလားပင်လယ်အော်, ဗီယက်နမ်ပို့စကတ် ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | လမ်းပြ, ဗီယက်နမ်
La Halong ပင်လယ်အော် ဒါဟာ၌တည်ရှိ၏ ဗီယက်နမ်အရှေ့တောင်အာရှတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုချမ်းသာသည့်ကျောပိုးအိတ်များနှင့်ခရီးသွား destination ည့်သည်များအတွက်ရည်ရွယ်သည့်နေရာသည်၎င်းသည်စျေးအချိုဆုံးသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်မဟုတ်သော်လည်းကောင်းမွန်သောစျေးပေါသော hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်ခြင်းကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
Halong ဂလားပင်လယ်အော် နိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်တွင်ရှိသည်တရုတ်နှင့်နယ်စပ်နှင့်မနီးမဝေးနှင့် ဟနွိုင်းမှကီလိုမီတာ ၁၇၀ သာဝေးသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့်အတူအခြားလူကြိုက်များမြို့။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ Halong Bay သည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါး။ ရှာကြစို့!
ပင်လယ်အော် အကြောင်းကို 1500 စတုရန်းကီလိုမီတာယူထားသော ၎င်းသည်တံဆိပ်အောက်ရှိလှပသောကာကွယ်ထားသောနေရာဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ကမ်းရိုးတန်းသည်ကီလိုမီတာ ၁၂၀ ရှည်လျားပြီးveryရိယာသည်အလွန်ခရီးသွား is ည့်သည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများစွာရှိသည် ဒီမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါ။
လှေစီးခရီးစဉ်များ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်စားသောက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ မမေ့နိုင်သောနေဝင်ချိန်များကိုပျော်မွေ့ခြင်း (သို့) ကေးရှင်းခြင်းကဲ့သို့သောပိုမိုတက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခရုဇ်များနှင့်စကြပါစို့
အ cruises ၎င်းတို့ကိုဟိုတယ်များနှင့်ခရီးသွားအေဂျင်စီများကကမ်းလှမ်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်ရေသည်၎င်းကိုအလှဆင်ထားသောထောင်နှင့်ချီသောကျွန်းငယ်များ၊ လှပသောကမ်းခြေများ၊ ထုံးကျောက်ဂူများ၊ ပြည်တွင်းရေကန်များနှင့်ခြေတံများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောကျေးရွာများကိုပင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်တယ်၊ လှေစီး.
အရသာအားလုံးအတွက် Hulong ဂလားပင်လယ်အော်ခရီးစဉ်များရှိသည်ဇိမ်ခံကနေကျောပိုးအိတ်အထိ။ ထို့ကြောင့်တစ်နေ့တည်းတွင်မရောက်ရှိခြင်းနှင့်မသွားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ သင်အနည်းဆုံးတစ်ညတည်းခိုရမည်။ များစွာသောခရုဇ်များပါဝင်သည် အင်္ဂလိပ်စကားပြောလမ်းညွှန် အကယ်၍ သင်သည်သူတို့အားဟိုတယ်မှငှားရမ်းပါက၎င်းတွင်သေချာပေါက်ပါ ၀ င်သည် လွှဲပြောင်း၀ င်ငွေကိုအားသွင်းပေးသောဆိုဒ်များနှင့်အချို့သော inflight ဖျော်ဖြေမှုများပင်။
ပြီးတော့မင်းမှာပိုက်ဆံပိုများလာရင်၊ နှစ်ရက်နှင့်တစ်ညအပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းရှိသည်။ ပိုက်ဆံပိုများဖို့၊ တွေ့ဆုံရန်အလှအပပိုများရန်နှင့်ရေကူးရန်အချိန်များစွာရှိသည်။ ရေကူးခြင်း၊.
အပျော်စီးသင်္ဘောများမဖြစ်မနေရပ်နားရန်မှာ ကြောင်ဘကျွန်း ရေပေါ်ကျေးရွာများ, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များနှင့်ဘားရှိပါတယ်။ ပင်လယ်နှင့်စိမ်းလန်းသောတောင်တန်းများအကြားရှိဤကျွန်းသည်လှပပြီးလှပပြီးကျွန်းစုများဖြင့်ကျော်ကြားသည်။ Bai Chay ဆိပ်ကမ်းနှင့် ၂၈ ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသည် ၎င်းသည်ရေကူးခြင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်းအတွက်အများဆုံးရွေးချယ်သောနေရာဖြစ်သည် နည်းနည်းတော့ရေကအရမ်းကြီးတာပေါ့ သန္တာစနစ်အလွန်နက်ရှိုင်းသောဂူများနှင့်အတွင်းခန်းခြောက်ခုရှိသည်။ ဒီဂူတွေကိုဒီရေအနိမ့်မှာလှေနဲ့ပဲလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ ရွှေမျောက်တွေကဒီမှာနဲ့အဲဒီမှာခုန်နေတာကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်။
နောက်ထပ်ခရုဇ် ဦး တည်ရာသည် ဘိုဟန်ကျွန်း၎င်း၏ဂူများအတွက်အလွန်ကျော်ကြား။ ဟုတ်လား Trinh Nu ဂူ၊ Sung Sot ဂူနှင့် Trong ဂူတောင်များ၊ ချောက်များနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေသောသစ်တောများအကြား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟာ Bai Chay ဆိပ်ကမ်းကနေ ၂ နာရီကြာလှေစီးခရီးထွက်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမယ့်ခရီးနဲ့သွားရာလှပတဲ့ Halong Bay National ဥယျာဉ်ရဲ့သစ်ပင်တွေနဲ့အတူလှပတဲ့အတွက်ဒါဟာသိပ်ကိုတန်တယ်။ ညသစ်ခွများနှင့်သစ်ခုတ်များ။
လမ်းကြောင်းပေါ်နောက်ထပ်ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည် တီထိပ်ကျွန်းBai Chay ဆိပ်ကမ်းမှ ၈ ကီလိုမီတာသာဝေးသည်။ Titop သည်ပျော်စရာကောင်းသည်မှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်သူမအားလာရောက်ခဲ့သည့်ဆိုဗီယက်အာကာသယာဉ်မှူး၏နောက်ဆုံးအမည်ဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေကအံ့မခန်းပါပဲနူးညံ့သောသဲများနှင့်ယူနန်ပြည်နယ်၏ရေတို့ဖြစ်သည်။ သင်၏အာမင် ဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်းများ, အရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်စျေးဆိုင် နေရာတိုင်းမှာ။ အားလုံး၏အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းကျယ်ရှုထောင့်အတွက်ကျွန်းပေါ်ရှိအမြင့်ဆုံးအထိလှေကားထစ်လှေကားပင်လေးပင်ရှိသည်။
ဒီကနေဟောင်ကောင်ဂလားပင်လယ်အော်တစ်ခုလုံး၊ ကျွန်းသူကျွန်းသားအားလုံးနဲ့တံငါသည်တွေနဲ့လယ်သမားတွေတွေ့နိုင်တယ်။ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိပြီးယခုအခါကမ်းလှမ်းသည် ကလှေလှော်ခြင်း၊ ပုလဲမွေးမြူရေးခြံများသို့လည်ပတ်ခြင်း, ငါးဖမ်းသင်တန်းများ သို့မဟုတ်ရုံဒေသခံဘဝကိုသိရန်လမ်းလျှောက်။ နောက်ဆုံးတော့ Halong ဂူများသည်မိမိတို့ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသည် ပြီးတော့သင်သိထားတာကိုရွေးချယ်ပါ၊ အဲဒါတွေကိုမကျော်လွှားနိုင်ပါ Dau Go ဂူ နှစ်သန်းကျော်ကျော်နှင့်မီတာ 20 အမြင့် stalactites နှင့် stalagmites အတူ။
ဒီဂူမှတဆင့်သင်လုပ်နိုင်သည် အင်္ဂလိပ်စကားပြောလမ်းညွှန်နှင့်မိနစ် ၉၀ လမ်းညွှန်ခရီးစဉ်သဘာဝနှင့်အတုအယောင်အလင်းများပါသော၎င်း၏အလင်းရောင်ရှိသောအပိုင်းသုံးပိုင်းသို့သွားပါ။ လမ်းကြောင်း၏အဆုံး၌ရှိသောရေကန်ငယ်လေးသို့ရောက်ရှိပါ။ ဒါဟာနတ်သမီးပုံပြင်တစ်ခုလိုပါပဲ နောက်တစ်ခုက Trinh Nu ဂူသို့မဟုတ်အပျိုစင်ဂူ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒဏ္withာရီ (အမျိုးသမီး Mandarin ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတင်းအကျပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏) နှင့်အတူအမျိုးသမီးရုပ်ထုနှင့်အတူ။
La Sung Sot ဂူ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် Bo Hon ကျွန်းတွင်ကင်မရာနှစ်ခုနှင့်မီတာ ၃၀ မြင့်သောအစိတ်အပိုင်းရှိသည် နမ်းတဲ့ကျောက် o နမ်းကျောက်ဆောင်အစစ်အမှန် Halong ဂလားပင်လယ်အော်တစ် ဦး သည်ကြက်တစ်ကောင်နှင့်တူ၏၊ ဒေသခံများအတွက်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ ထာဝရချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
ခရုဇ်များအပြင် Halong Bay သည်သင့်အားအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်: သင်၏ရှုခင်းများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူပါ။ ရေကူးခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊။ အမှန်တရားကတော့ငြိမ်ငြိမ်မထိုင်ချင်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါပဲ။
La Cat ba ကျွန်းသည်တောင်တက်ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် မြင်နိုင်သောရှားပါးတိရိစ္ဆာန်များ၊ မျောက်များ၊ လိပ်များနှင့်ခရီးသွားရန်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ သူတို့ရွာတွေကစက်ဘီးတစ်စီးလည်းစီးနိုင်တယ်။ အတိအကျပြောရလျှင်၊ ဤကျွန်း၏အစွန်အဖျားရှိဗီယက်ဟွာကျေးရွာတွင် ၀ ါးအိမ်များနှင့်ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ရာနေရာများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်ရေပန်းစားသောကျွန်းများမှာသန္တာကျောက်တန်းများနှင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်း၊ အံ့ဖွယ်ကောင်းသောဥမင်များရှိသည့် Dau Go ကျွန်း၊ Cat Ba ကျွန်း၊ ခရီးသွား very ည့်သည်အလွန်,၊ Hung Sung Sot ဂူနှင့် Bo Hon ကျွန်း၊ Cueva de la Virgen နှင့် Cueva del Pelícanoနှင့်မြင့်မားသောမျက်နှာကျက်မှဆွဲထားသော stalactites နှင့်ပင်လယ်အော်၏ပုံမှန်အားဖြင့်ရေပေါ်ရွာများနှင့်အတူ, ည့်သည်များအကြားနောက်ထပ်ပုံမှန်ဆွဲဆောင်မှု။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်တော်မူချက်အတိုင်းပျော်မွေ့ခြင်းမရှိဘဲဤဗီယက်နန်ကိုမစွန့်ခွာနိုင်ပါ gastronomy ။ အဆိုပါareaရိယာ၌ကြွယ်ဝသည် ရေထွက်အစားအစာ ဒီတော့ကမာ၊ ပုစွန်နှင့်ငါးများသည်မီနူးတိုင်းတွင်ရှိသည်။ အမြဲတမ်းလတ်ဆတ်သောသူတို့သည်နေ့၏အစောပိုင်းနာရီများအတွင်းဖမ်းမိပြီးစားသောက်ဆိုင်များအားလုံးသို့တင်ပို့သည်။ သူတို့အများစုသည်ကမ်းခြေရှေ့ရှိ Bai Chay မြို့တွင်တည်ရှိပြီးအခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများလည်းရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဗီယက်နမ်အစားအစာနှင့်ပင်တရုတ်အစားအစာ။
ထိုအခါငါအကြံပြုသောနောက်ဆုံးအတှေ့အကွုံဖြစ်ပါတယ် ရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်မှာစားပါ။ Cat Ba ကျွန်း၏ဘေးတွင်အများအပြားရှိပြီးအစားအစာသည်လတ်ဆတ်သောကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ ဥပမာ? Green Mango စားသောက်ဆိုင်သည်ဆိပ်ကမ်းမြင်ကွင်းနှင့်အလွန်အေး။ အလယ်အလတ်စျေးနှုန်းများရှိသည်။ ပင်လယ်အော်၏ရှုခင်းများကိုကြည့်နိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ Huu Dung ဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်းဟင်းလျာများအတွက် Cat Ba ကျွန်းအလယ်ရှိ Noble House Restaurant & Bar ကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » လမ်းပြ » Halong ဂလားပင်လယ်အော်, ဗီယက်နမ်ပို့စကတ်